Taariikhda My Butros » Sida loo sameeyo Open Xiriirka Shaqada
Last updated: Jan. 12 2021 | 3 min akhri
Waxaa jira qadka ka a song Brooke Fraser in uu aado "jacayl Real waa jacayl adag". Tani ma noqon kartaa in ka badan badnaayeen,. Si ka duwan Mills & Boons tixaha jacaylka ama filimada Disney, xiriirka had iyo jeer ma aakhirka la lamaane ay fuushan off galay qorrax. Maxaa timid ka dib markii caddayntu ee jacaylka waa dadaal iyo go'antahay. Aadanuhu waxay inta badan ku Dadaashid kaamil ah laakiin waxa ay si deg deg ah ka heli kartaa jir. Life waa mid adag oo ku filan oo aan haysan si ay ula dhan riwaayadaha in jireenka qaban. Dhinaca kale ee lagu sameeyo baaxadda, waxaa jira dad ku jira xiriirka oo u furan yihiin shukaansi ama arkaan dadka kale. Halka ereyga "xiriir furan" ayaa lagu haadiyaa wakhti dheer qaar ka mid ah, qeexidda cad waxa weeyaan xiriirka noocan weli wareer inta badan dadka.
Waxa ay dhab ahaan Xiriirka Open?
Qaar baa ku doodi in in xiriir furan oo dadka ku siinayaa xorriyad iyo dabacsanaanta ee lagu lifaaqo aan miisaan ku daray of laga filayo iyo dadaalka monogamy. Qaar kale opine in sida kaliya ah fanaaniinta cusub ee ogolaaday in la-hawlgalayaasha qishaan midba midka kale. Wax kasta oo ra'yi yahay, waxaa jira calaamado cad si ay u muujiyaan in xiriir furan oo ha shaqeeyo marka la maareeyey oo si fiican loo. Sida xiriirada kale, waxa ay ku xiran waxa qof kasta uu doonayo. Waxaa cad, dadka ku jira noocaan ah xiriirka ku jiraan halis ah soo food saartay noocyada kala duwan ee heartaches. Si ka duwan partners in xidhiidhada, kuwa aan xiriir furan oo aan haysan fursad ay of barbaro "isaga / iyada khiyaameeyay ii on" kaarka. Sidaas sida mid aanu tegi ku saabsan hubinta in xiriirka u furan waa mid ka mid ah guulaha iyo hadhid?
Goal Common iyo Udirista
Bilow, waa inuu jiraa jiidashada - jirka iyo shucuurta labadaba - u dhexeeya labada dhinac. Ka dib dhan, in uu noqon doono sababta ugu weyn ee labadoodiiba wax bay wada yihiin in meesha ugu horeysa. Just, sababtoo ah waxay isu tagay furo sahaminta la qaybaha kale ee danaynaya kama duwi waa in laga xaqiiqada ah in laba qof ay go'aansadeen in ay sameeyaan si kasta oo kale oo hab iyaga u gaar ah. Shaqaynta ka soo jiidashada this, go'aanka for xiriir furan Waxaa dhici karta in labada iyaga ka mid ah ayaa weli xiiseyneysa fursadaha kale ee sahaminta. Saasaana, awoodin in ay maareeyaan xiriir furan waa arrin ah hubinta in labada dhinac ay fahmaan "Xeerarka" ee ciyaarta. Wax badan oo kale ah xiriir galmo caadi ah, kuwa xiriirka furan iyo sidoo lahaa heerarka iyaga u gaar ah. Cuntadan in a xiriir guul furan qabo labada is faham labada dhinac oo is qorin isla xeerasha.
Daacadnimo Goes A Long Way
Sida wax walba oo kale ee nolosha, daacad waa qayb weyn oo ka mid ah xidhiidhka ka furan. Ka dib dhan, ku saleysan xiriir furan yahay xaqiiqda ah in uu jiro is aaminaad caafimaad leh u dhexeeya wadaajinayaan. Sida keliya oo shaqayn karaa waa haddii labada Run in kale ah waa kuwo mar kasta. Waxaa kale oo ku saabsan maaraynta filayo. In lagu jiro xiriir furan waa mid aad la mid ah noocyada kale ee xiriirka in aad aragto meel kasta. Ilaa iyo inta ay labada dhinacba waa u fudud ku saabsan waxa u dhigantaa, dhaq-xiriirka iyo waxay awoodi karaan inay si joogto ah u shaqeeyaan dhinaca gool tan caadiga ah, ma jiraan wax sabab xiriirka furan shixnadda dheer ma socon doono. Mid ka mid ah qayb muhiim ah in a xiriir guul u furan si fudud ay tani tahay: waxa aanu qof kasta ka fili soo baxay waxaa ka mid ah? Haddii tani ay tahay in lays waafajiyo, xidhiidhka ka furan ayaa lagu wadaa inuu tago.
Dabcan, xiriir furan Cid walba. Sida noocyada kale ee xiriirka, waxay dhammaan kartaa in jabka. Si kastaba ha ahaatee, waxa kale oo ay noqon kartaa qalab xiriir aad u faa'iido ah oo si gaar ah loogu talagalay dadka ka heshaa lammaane joogta ah halka ay fursad u helaan in ay la kulmaan kuwa kale waqti isku mid ah. Qaar badan oo laga yaabo in opine xiriirka in furan kacaa salaysan aad u of macnaha dhabta ah ee ay ka go'antahay iyo jacaylka. Si kastaba ha ahaatee, sidoo kale waxaa jira kiisas ku dheehan partners in xiriir furan oo run ahaantii ma doortaan in ay taariikhda ama la kulmo dadka kale. Kuwa ka heli guusha in xiriir furan oo inta badan ka heli in la siiyay xoriyad ah in taariikhda dadka kale dhab iyaga barbaro ku dhow in ay la-hawlgalayaasha ay. Xaqiiqda muhiimka ah ee xiriirka dhab ahaantii ma aha calaamad ah in mid ka mid muu iyaga laakiin awoodda ee koox kasta ay u sameeyaan go'aano codka oo ku salaysan is faham wadaaga.
Online Dating: Ka fogaanshada qabidda Catfished
5 Dog Friendly Fikradaha Wixii Date A First